लगातार ४ दिन बढेको सुनको भाउ घट्यो !! कतिमा हुदै छ कारोबार हेर्नुहोस – Tufan Media News
लगातार ४ दिन बढेको सुनको भाउ घट्यो !! कतिमा हुदै छ कारोबार हेर्नुहोस
२० आश्विन २०७८, बुधबार १४:५८
काठमाडौँ : साताको चौथो दिन आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। सुन आज चार सयले घटेको हो। यस हप्ता सुन आइतबार दुई सयले बढेको थियो भने सोमबार स्थिर थियो। मंगलबार पाँच सयले बढेको सुन बुधबार चार सयले घटेको हो।
गत हप्ता आइतबार स्थिर रहेको सुन सोमबार तीन सयले बढेको थियो। मंगलबार तीन सयले घटेको थियो भने बुधबार एक सयले घट्यो। यस्तै बिहीबार दुई सयले घटेको थियो। शुक्रबार ९ सयले बढेको थियो।
आज छापावाला सुनको प्रतितोला ८९ हजार ९०० मूल्य निर्धारण भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन आजका लागि ८९ हजार ४५० मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।यता चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ। चाँदी आज एक हजार १६० रुपैंयाँमा कारोबार भइरहेको छ।